Umaki: ukuhlanganiswa kwe-sms ye-wordpress | Martech Zone
Maka: ukuhlanganiswa kwe-sms ye-wordpress
Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi bengithule kuleli sonto eledlule. Akukhona ngokuswela umsebenzi, ngibe neviki elimatasa impela! Omunye wamaphrojekthi ebengisebenza kuwo kuleli sonto kube yi-WordPress Plugin evumela ukuhlanganiswa okuqondile kwe-SMS ne-Connective Mobile. I-plugin iqinile impela, inokubambisana kokulawula kanye ne-interface yombhali. Isixhumi esibonakalayo somlawuli sikuvumela ukuphatha izici zokuhlanganiswa. I-interface yombhali ivumela
Kule mpelasonto ngiqale ingxoxo nomculi wakule ndawo obesiza umphathi wakhe ngokuphathwa kwezicelo ezimbalwa zewebhu ezingabaphathi bakhe. Ingxoxo yathatha ithuba futhi okunye ukuvota kwaqhubeka mayelana nokukhokha imali yokuthuthuka yamasonto onke ngaphandle kokubona inqubekelaphambili nonjiniyela abasebenza naye. Manje unjiniyela ufuna ukubakhokhisa enye imali eyisamba ukuqedela iphrojekthi kanye neviki